माधव नेपाल भित्रभित्रै फर्सी कुहिएझैं कुहिसके छ : केपी ओली – SaipalNews.com
काठमाडौं २२ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको साथ छाडेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे मंगलबार एउटै मञ्चमा देखिए ।पोखरामा आयोजित वृहत कार्यकर्ता भेलामा पाण्डेले सम्बोधन गरिरहेका बेला ओली पुगेका थिए । पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको अन्तरसंघर्षबारे तात्तातो समीक्षा गर्न नहुने बताएका पाण्डेले ओली मञ्चमा आएपछि १० बुँदे सहमतिलाई फेरि दोहोर्‍याए ।
माधव नेपालले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावकै मर्मअनुसार सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘१० बुँदामा कायम भएपछि पार्टी एकता किन नगर्ने रु यो कुरा हामीले माधवजीलाई पटक पटक भन्यौं । तर माधवकुमार नेपालले बाउँठिएर एमाले फुटाउने र नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने काममा लागेको उनले बताए । पाण्डेपछि अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरे । माधव नेपालको चर्को आलोचना गरेका उनले साबिकको नेकपा र पुनस्र्थापित एमालेमा देखिएकाको समीक्षा समेत गरेका छन् ।
साबिकको नेकपा पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास असफल भएपछि सरकार ढाल्ने र एमालेलाई चारैतिर पासो थाप्ने कामको अगुवाइ माधव नेपालले गरेको ओलीको आरोप छ । वैशाख २७ मा आफूले संसदमा विश्वासको मत माग्दा माधव नेपाल २७ सांसद लिएर बाहिर गएको र सरकार ढालेको उनले बताए । त्यसपछि पनि आफूलाई सरकारबाट हटाउन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ र सर्वोच्च अदालत जानु अराजकता र पार्टीविरोधी काम भएको उनले बताए ।
देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा समर्थन गर्ने २६ तथा संसद पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालहरु पनि थिए । लामो समय माधव नेपाल निकट रहेका उनीहरु १० बुँदे समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिका आधारमा एमालेकै क्रियाशील भएका छन् ।तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने उनीहरुलाई हरियो सापको संज्ञा दिएका छन् । उनले अघि भने ‘हाम्रै पार्टीभित्रका हरिया साँपहरुलाई प्रयोग गरेर हामीलाई डस्ने काम भयो । त्यसकारण आज हामी सरकार छैनौं, प्रतिपक्षमा छौं ।’
२७ वैशाखमा म विश्वासको मतमा गएँ । विश्वासको मत आउँथ्यो, तर माधव नेपालले आफ्नै २७ जना लिएर बाहिर गए । एमालेको सरकार ढलाए, अल्पमतमा पारे । संसद अन्त्य भयो । अहिले माधव नेपाल संसद बचाउनका लागि भन्दै हिँडेका छन् । संसद बचाउने भोट दिइँदैन ? जे होस्, एमालेको सरकार ढालियो ।
हाम्रै साथीहरु केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाइपाऊँ, शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिपाऊँ भनेर कागज यसो झुण्ड्याउँदै शेरबहादुर देउवाका पछिपछि लुखुर लुखुर गर्दै राष्ट्रपति कहाँ गए । त्यहाँबाट नियुक्त हुन सकेन र शेरबहादुर देउवाका पछिपछि फेरि केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाइपाऊँ एमाले सरकार ढालिपाऊँ, एमालेको सरकार प्रतिगामी भयो ।
यो त संविधान विपरीत भयो । जनताले छानेको सरकार हटाइपाऊँ, अदालतबाटै सरकार बनाइ पाऊँ । यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हुन्छ भनेर हाम्रै मान्छेहरु पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगे । यस प्रकारको अराजकता, अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी क्रियाकलाप हाम्रै पार्टीभित्रबाट भयो । हाम्रै पार्टीबाट यस प्रकारका क्रियाकलाप हुनु लाजमर्दो हो । आखिर हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरबाट मात्र त्यो सम्भव थिएन । हाम्रै पार्टीभित्र घुसपैठ गरेर हाम्रै पार्टीभित्रका हरिया सापहरुलाई प्रयोग गरेर हामीलाई डस्ने काम भयो । त्यसकारण आज हामी सरकार छेनौं, प्रतिपक्षमा छौं ।
कुहिएको फर्सीलाई नेता मान्नुभो ?
अध्यक्ष ओलीले अहिले माधवकुमार नेपाल, एमालेलाई लखेट्ने काममा लागेको बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी र कांग्रेससँग मिलेर संसदीय दल फुटाउने काम गरेको, लुम्बिनीमा सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर राजीनामा गराएको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेश १ र बाग्मतीको सरकार ढाल्न लागेका छन् ।’उनले अघि भने, ‘तपाईंहरु नेता नेता भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर भित्रभित्रै फर्सी कुहिएझैं कुहिसकेको थिएँ ।’
एक्लै जाऊ भनेर पठायौं
स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका पूर्व नेता नेपाललाई एमालेमा फर्किन आग्रह मात्र गरेनन्, क्षमादान पनि दिइने बताए । उनीपछि सम्बोधन गरेका अध्यक्ष ओलीले भने माधव नेपाल विना एमाले अगाडि बढ्ने बताए । धुन्धुकारी जन्मियो भने कुल नै समाप्त पार्ने भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा पनि यस्तो एउटा कुपुत्र जन्मियो, बल्लबल्ल कुल जोगाइयो ।
पार्टी नै कब्जा गर्छु भनेका माधव नेपालहरुलाई कार्यकर्ताले एक्लै जाऊ भनेर पठाएको उनले बताए । ओलीले अघि भने, ‘पार्टी नै कब्जा गर्न खोजेको होइन, त्यो पार्टी खोसेर तपाईंहरुले बचाउनुभएको छ । अनि पार्टी कब्जा गर्छु भन्नेलाई तपाईंहरुले एक्लै परतिर जाऊ भनेर हटाइदिनुभएको छ । के फरक परेको छ ?
नयाँ बानेश्वरमा युवती बलात्कृत, चार महिनापछि यसरी सार्वजनिक भयो तथ्य